Caalamka, 12 June 2018
Talaado 12 June 2018
Rajo laga muujiyey mustaqbalka gacanka Korea
Qaar ka mid ah hogaamiyaasha Qaarada Asia iyo kuwo kale oo caalamka ah ayaa rajo wanaagsan ka muujiyay mustaqbalka gobolka, kadib kulankii taariikhiga ahaa ee Talaadada maanta dalka Singapore ku dhexmaray madaxweynaha Mareykanka Donald Trump iyo hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un.
Taliban oo qabsaday degaan cusub
Dagaalyahannada kooxda Taliban ee dalka Afghanistan ayaa dulmaray degmo, islamarkaana halis geliyey mid kale, kadib markii xabbad joojin ay si iskeed ah ugu dhawaaqday dowladda ay dhaqan gashay maanta.
Kulan taariikhi ah oo dhexmarey Trump iyo Kim
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump iyo hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi ayaa yeeshey kulankoodii ugu horeeyey abid, kaas oo ka dhacay Singapore, maanta.
12 Ku Dhimatay Qarax Ka Dhacay Kabul
Ugu yaraan 12 ruux ayaa la xaqiijiyay in ay ku dhinteen kadib marki qof naftiis dile ah uu isku qarxiyay maanta magaalada Kabul ee caasimadda Afghanstan.
Taliban oo Dagaalka Hakineysa Maalmaha Ciidda
Kooxda Taliban ayaa Sabtidii ku dhawaaqday inay joojin doonto muddo seddex maalmood ah weeraradii ay ku heysay dowladda Afghanistan inta lagu guda jiro maalmaha Ciidda, kadib bil la soo soomayay.
Canada: Faysal Xasan oo ku Guuleystay Xildhibaannimo
Gobolka Ontario ee dalka Canada oo ay ku noolyihiin Soomaali badan waxaa xalay lagu dhawaaqay natiijada doorashooyin ka dhacay.
Shirka Dhaqanka oo Paris Lagu Soo Gagaba-gabeeyay
Magaalada Paris ee dalka Faransiiska waxaa lagusoo gaba gabeeyay shirweynihii dhaqanka ee hay’adda UNESCO ee Qaramada Midoobay ay soo qaban qaabisay.
35 Ruux oo ku Dhimatay Duqeyn Suuriya Ka Dhacdey
Ugu yaraan 35 ruux ayaa la xaqiijiyay in ay ku dhinteen tobaneeyo kale oo ay caruur ku jiraanna ku dhaawacmeen, weerar dhinca cirka ah oo lagu qaaday deegaannada ay maamulaan mucaaradka ee gobolka Idlib ee dalka Suuriya.